Imaaraadka oo sharfay & Somalia oo amaantay Raysal Wasaaraha NZ + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Imaaraadka oo sharfay & Somalia oo amaantay Raysal Wasaaraha NZ + Sawirro
Imaaraadka oo sharfay & Somalia oo amaantay Raysal Wasaaraha NZ + Sawirro
(Dubai) 23 Maarso 2019 – Dhismaha adduunka ugu dheer ayaa laga shiday sawirka RW New Zealand ee Jacinda Ardern oo hab siinaysa haweenay murugoonaysa oo Muslim ah, masjidka Kilbirnie ee caasimadda Wellington.
Dabaqa dhererka badan ee Burj Khalifa oo ku yaalla magaalada ganacsi ee Dubai ayaa lagu tolay sawirka Ms Ardern oo DIGITAL ah, iyadoo xiran xijaab madoow, iyadoo sawirka la raacsiiyay dhererka dhismaha oo gaaray 829m.
Erayga ‘nabad’ oo Carabi iyo Ingiriisi ku qoran ayaana lagu dhigay, iyadoo haweenaydan lagu sharfayo doorka hoggaamineed iyo midka insaannimo ee ay ku wajahdey weerarkii argagixiso ee lagu qaaday masaajidda Christchurch oo lagu diley 50 ka mid ah jamaacadii masaajiddaasi.
RW Imaaraadka oo sidoo kale xukuma Imaaradda Dubai, Sheik Mohammed, ayaa sawirkan twitter-ka ku faafiyay isagoo Ms Ardern uga mahad celiyay taageerada ay siisay Muslimiinta.
Wasiir Dibadeedka Somalia Md Axmed Ciise Cawad ayaa isagoo ka qayb gelaya shir aan caadi ahayn oo uu iskugu yimi ururka Iskaashiga Islaamku, wuxuu hoggaamiye cajiib ah.
Previous articleSomalia abstains from vote condemning Israeli occupation in Golan Heights
Next articleDAAWO: ”Waayaha lagu war la’yahay ee DISCO-gii Somalia!” – The Guardian oo isu raadiyay fanaaniintii hore ee Somalia qaarkood